Gen. Odowaa oo war kasoo saaray qaraxii ismiidaaminta ee saldhigga ciidanka xoogga - Caasimada Online
Home Warar Gen. Odowaa oo war kasoo saaray qaraxii ismiidaaminta ee saldhigga ciidanka xoogga
Gen. Odowaa oo war kasoo saaray qaraxii ismiidaaminta ee saldhigga ciidanka xoogga
Biya-cadde (Caasimada Online) – Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar ismiidaamin ah oo Al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla deegaanka Biyo-cadde oo ka tirsan Gobalka Shabeellada Dhexe.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Gen Odawaa Yuusuf Raagge ayaa sheegay in gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray banaanka hore ee saldhig ay taliska xoogga ku leeyihiin deegaanka Biyo Cadde ee gobolka shabeellada Dhexe.
Gen Odaywaa ayaa intaas raaciyay in Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo u taagan difaaca Dalka iyo Diinta ay sii labalaabayaan howlgalada ka dhanka ah Al-shabaab oo uu sheegay inay banneysatay daadinta dhigga umadda Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah.
4 askari oo ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka ayaa geeriyootay halka tiro kale ay dhaawacmeen sida ay Caasimadda Online u xaqiijiyeen ilo kala duwan kadib markii Gaariga qarxay lagu dhuftay mid kamid ah Difaacyada Xerada Ciidanka.
Askarta la qarxiyay waxa ay hoostagaan Taliska 27-aad ee Militariga Soomaaliya, waxaana gaaray Gurmad ay u sameeyeen ciidamada kale ee ku sugan xeryaha u dhaw sida ay sheegeen ilo kala duwan.
Ciidamadaan waxa ay qayb ka ahaayeen Askartii diidday muddo kororsiga Madaxtooyada ee Golaha Shacabka uu sameeyay ee la magac baxay “Badbaado Qaran” oo heshiis kadib dib loogu celiyay Saldhigyadii ay kasoo baxeen 7-dii May 2021.